ကလိုစေးထူး: တကယ် လုပ်သင့်တဲ့ အရာ…
အစ်ကို့ ကိုကော ကိုစိန် ဆိုသော အစ်ကိုကြီးကို ပါ လေးစားပါတယ်ဗျာ ပို့ စ်လေးဖတ်ပြီး ၀မ်းသာပီတိလည်း ဖြစ်မိတယ် ဒါက နိုင်ငံေ၇းမဟုတ်ဘူး ကျနော်တို့ ချစ်လှပါသည်ဆိုသော သူတွေအတွက်အရေးဆိုတာလေးကိုလည်း သဘောကျတယ် ။
May 20, 2008, 10:04:00 PM
May 21, 2008, 12:17:00 AM
May 21, 2008, 12:21:00 AM
ဒါက နိုင်ငံေ၇းမဟုတ်ဘူး ကျနော်တို့ ချစ်လှပါသည်ဆိုသော သူတွေအတွက်။
May 21, 2008, 1:44:00 AM
May 22, 2008, 3:35:00 AM
လေးစားဂုဏ်ယူပါတယ်အစ်ကို...။ စေတနာမှန်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ရပ်တွေ အောင်ကို အောင်မြင်ရမှာပေါ့ :)...။ အရမ်းဝမ်းသာတယ် အစ်ကိုရာ။
May 22, 2008, 3:10:00 PM
And you are very good writer. Nice writing..
May 23, 2008, 10:51:00 PM
တကယ်လုပ်သင့်တဲ့အရာကို အားကြိုးမာန်တက်လုပ်ဆောင်ခဲ့တာ လေးစားပါတယ် ကိုစေးထူးရေ….
May 25, 2008, 10:29:00 PM